Waxaa laga yaabaa inay dhacdo El Niño qeybtii labaad ee sanadka | Saadaasha Shabakadda
El Niño waa dhacdo saadaasha hawada oo oscillates ku wareegaysa 5 ilaa 7 sano. In kasta oo xasilloonida uu sanadkan 2017 haysto, haddana Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO) kama diidayo 100% in ifafaalaha saadaasha hawadu wali horumarin karo.
Dhacdadani waxay ku dhufaneysaa dabaylaha ganacsiga jihada Peru iyo Ecuador, taas oo keenta duufaano xoog badan oo kuleylaha ah oo ka dhaca goobahan kuwaas oo horseeda daadad halis ah. Dhinaca kale, Hindiya waxay sababtaa abaaro daran oo keena cunno iyo dhibaatooyin beeraha. Dhacdada El Niño ma dhici doontaa markale 2017?
1 Waxay u badan tahay inuu dhaco
2 Ifafaale El Niño
3 Khasaaraha uu sababay El Ni causedo
4 Dhacdooyinka La Niña
Waxay u badan tahay inuu dhaco
WMO waxay dejisaa suurtagalnimada dhacdo ifafaale hawleed gaar ah oo ku saleysan doorsoomayaasha qaarkood sida isbeddelada cadaadiska, jihada dabaysha, duufaanada suuragalka ah, iwm. Taasi waa sababta, iyada oo ku saleysan caddaynta qaar, waxay sii deysay bayaan sheegaya in laga soo bilaabo kor, xaaladaha saadaasha hawada ee kala duwan ayaa laga yaabaa inay ka yimaadaan xaalado dhexdhexaad ah illaa dhacdo El Niño, laakiin xoog dhexdhexaad ah.
Maxaad uga jeeddaa xoog dhexdhexaad ah? Hagaag, duufaannada iyo duufaannada El Ni cano ay abuuri karto way ka yaraan doonaan sidii caadiga ahayd. Dabaylaha ganacsigu waxay ku duulayaan xoog yar, taas oo aan abuuri doonin wajiyo aad u waaweyn oo sababa duufaanno aad u xoog badan. Khubarada saadaasha hawada waxay leeyihiin moodooyin saadaalinaya isbedbedelka cimilada iyo saadaasha hawada, mahadnaqooda darteed waxay xaqiijin karaan in qeybta labaad ee 2017 dhacdo El Nino ah ayaa ku dhici karta iyadoo u dhaxeysa 50 ilaa 60%.
Dhinaca kale, suuragalnimada in cimilada qeybta labaad ee sannadka ay dhexdhexaad noqoto waa 40%.
Maaddaama ifafaalahan, in kasta oo la yaqaan, ay adkaan karto in la fahmo, waxaan faallo ka bixin doonaa dib-u-eegis kooban. Dhacdadani waxay soo saartaa hirar biyo diirran oo ka socda badweynta Baasifiga. Tani waxay keenaysaa kororka heerkulka badda ee xeebta. Sidaan sifiican u ognahay, hawada kulul waxay u egtahay inay u kacdo jawiga waana halkaan, markay isku dhacaan hawo qabow, way ururaysaa waxayna bilaabeysaa inay soo saarto daruuro cumulonimbus ah oo taagan. Daruurahaani badanaa waa kuwa sababa duufaanno xoog leh, xaaladdan oo kale, dhacdooyinka cimilada daran.
Dhacdadii ugu dambeysay ee El Niño waxay dhacday rubucii afaraad ee 2015 iyo bilowgii 2016 (markaa heerkulka sare ayaa soo gaadhay jiilaalka) wuxuuna saameyn ba'an ku yeeshay meelo badan oo adduunka ah. Waa inaan tixgelin siino in El Niño uu cawaaqib ku leeyahay ku dhowaad meeraha oo dhan, maaddaama mawjadaha badda ay kuleylka geynayaan dhammaan meelaha.
Khasaaraha uu sababay El Ni causedo
In kasta oo ifafaalaha El Niño uu yahay mid dabiici ah, isbeddelka cimilada iyo xasilloonida heerkulka adduunka awgood way sii xoogeysanaysaa oo waxay kordhineysaa soo noqnoqoshadeeda El Niño ee 2015 wuxuu saameeyay 4,2 milyan oo qof oo ku nool Bartamaha Ameerika, 4,7 milyan galbeedka Baasifigga iyo 30 milyan koonfurta Afrika, kuwaasoo ay saameeyeen macluul iyo cunno yari abaar daba dheeraatay awgeed. Intaas waxaa sii dheer, waxay sababtay roobab culus oo deegaanka ah oo ka yimid Jasiiradaha Galapagos illaa xeebaha Ecuador iyo Peru, kuwaas oo Waxay sababeen dhimashada 101, 19 la waayey, 353 dhaawac ah, 140.000 dhibbane iyo ku dhowaad 940.000 ay saameysay.
Waqtigan xaadirka ah, xaaladaha kululaynta ee badweynta badweynta ee dhamaadka bariga Baasifigga oo si ba'an u saameeyay Peru iyo wadamada ku dhow ayaa la dajiyay. Tani waxay keenaysaa xaaladaha El Niño inay noqdaan dhexdhexaad.
Dhinaca kale, khubarada saadaasha hawada ee WMO ayaa sheegay in dhacdo La Niña ah ay aad u yar tahay. Si ka duwan El Niño oo sababa kororka heerkulka miisaanka Baasifigga, La Niña wuxuu sababa hoos u dhac iyaga ku yimaada. Taasi waa sababta qaar ka mid ah gobollada abaaruhu u xanuunsadaan marka El Niño dhacdo ay u muuqdaan inay la dhibtoonayaan roobab culus oo ka dhigaya inay u koraan celceliska caadiga ah ama lid ku ah.
La Niña sidoo kale waxay la xiriirtaa firfircoonida duufaanka ee Badweynta Atlantik.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waxaa laga yaabaa inay dhacdo El Niño qeybtii labaad ee sanadka
'' Dhulgariirkii qarniga '' ee soo socda ayaa ka dhici kara Chile
Wabiga Niil wuxuu noqdaa mid sii yaraada lana sii odoroso